Gam akporo Wear ga-agbanwe aha ya wear OS | Akụkọ akụrụngwa
Ugbu a, smartwatches ndị dị na ahịa na-achịkwa ya obere ike nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ Companieslọ ọrụ dị iche. Na otu aka anyị na-ahụ Apple’s watchOS, Samsung’s Tizen and Android’s Android Wear. Na mgbakwunye, Android nwekwara sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ nke Android iji jikwaa telivishọn na ebe ọtụtụ mgbasa ozi ụgbọala.
Mgbe ihe ịga nke ọma nke gam akporo Wear n'elu ikpo okwu, ọtụtụ ndị na-emepụta na Ha akwụsịla ịkụ nzọ n'ahịa ndị eji ejiji, nwere obere n'ihi Google, ebe o yiri ka ọ hapụla ikpo okwu ya maka ihe eji ejiji, na-egbu oge ịmalite mmelite ọhụrụ nke ukwuu, ihe yiri ka ọ ga-agbanwe.
Otu n'ime isi ihe mere Google ji dị ka ọ gaghị akwụ ụgwọ mmasị na ikpo okwu ya nwere ike ịkwali ya ogbenye ahia nke ọnụahịa dabere na gam akporo Wear, onye kpatara ya nwere ike ịbụ, n'aka nke ya, na aha nke ikpo okwu, nke ọtụtụ ndị ọrụ gam akporo nwere ike iche na ọ bụghị dakọtara na iPhone, ọ bụ ezie na site na ngwa Wear gam akporo, ị nwere ike iji smartwatch jikwaa Android Wear na iPhone, ọ bụ ezie ya na otutu ihe ndi mmadu na-achotaghi n’ime Apple Watch.
Ahụla ihe a hụrụ, ọ ga-abụ na Google achọghị ịhapụ ikpo okwu gbahapụrụ, ma na-ezube ọtụtụ usoro nke ga - abịa n’isi nso. Nke mbụ na-emetụta aha, aha nke ga-aga site na akpọrọ Android Wear to Wear OS, na-echefu okwu gam akporo kpamkpam, ngagharị nke yiri ka ebumnuche maka "ịkọwa" na sistemụ arụmọrụ a dakọtara na iOS, yana ngwa ya kwekọrọ, ngwa ga-agbanwekwa n'ụzọ ezi uche dị na ya iji nweta aha ọhụrụ a.
O yiri ka ụlọ ọrụ ndị Mountain View na-achọ belata aha ụka dị iche iche ka o wee dokwuo anya maka ndị ọrụ. Enwere ike ịchọta ihe atụ ọzọ nke aha ọhụrụ na ikpo okwu ịkwụ ụgwọ, nke ọnwa ole na ole ka edegharịrị aha Google Pay kama gam akporo Pay. Google Pay awara a ukwuu na obere ọnụọgụ nkwa karịa ihe gam akporo Pay nwere ike inye, n'ụzọ dị otú a ụlọ ọrụ njin ụlọ ọrụ ọchụchọ chọrọ ka usoro ịkwụ ụgwọ ya na-aga n'ihu na-eto ma n'oge ụfọdụ karịa Apple Pay na Samsung Pay, na-eduga nyiwe na ụwa niile ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka ịkwụ ụgwọ elektrọnik site na ama.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » smartwatch » Gam akporo Wear ga-agbanwe aha ya wear OS